मर्कूस ११ | अनलाइन बाइबल | नयाँ संसार अनुवाद (२०१०)
११ उहाँहरू यरूशलेमनजिकै जैतुन डाँडाको बेथफागे र बेथानी पुग्नै लाग्दा उहाँले आफ्ना दुई जना चेलालाई यसो भनेर पठाउनुभयो: २ “तिमीहरूले देखिरहेको त्यो गाउँमा जाओ र त्यहाँ पस्नेबित्तिकै तिमीहरूले अहिलेसम्म कोही नचढेको एउटा पाजीलाई बाँधेर राखेको भेट्टाउनेछौ। त्यसलाई फुकाएर ल्याओ। ३ यदि कसैले ‘तिमीहरू यो के गर्दैछौ?’ भनेर सोध्यो भने यसो भन्नू, ‘प्रभुलाई यो चाहिएको छ र उहाँले तुरुन्तै फिर्ता गर्नुहुनेछ।’ ” ४ त्यसैले तिनीहरू गए अनि सडक छेउको एउटा घरको ढोकामा पाजीलाई बाँधिराखेको भेट्टाए र तिनीहरूले त्यसलाई फुकाए। ५ तर त्यहाँ उभिरहेका केही मानिसहरूले तिनीहरूलाई सोध्न थाले: “तिमीहरू किन यस पाजीलाई फुकाउँदैछौ?” ६ अनि तिनीहरूले येशूले सिकाउनुभएबमोजिम जवाफ दिए र उनीहरूले तिनीहरूलाई जान दिए। ७ तिनीहरूले पाजीलाई येशूकहाँ ल्याए र त्यसमाथि आफ्नो लुगा बिछ्याए अनि उहाँ त्यसमाथि बस्नुभयो। ८ साथै, धेरैले आ-आफ्नो लुगा बाटोमा बिछ्याए अनि अरू कतिले चाहिं छेउछाउका रूखहरूबाट स्याउलाहरू काटे। ९ अनि उहाँको अघि-अघि गइरहेका र पछि-पछि आइरहेकाहरूले यसो भन्दै जयजयकार गर्न थाले: “जय* होस्! यहोवाको नाममा आउने धन्यका होऊन्‌! १० हाम्रा बुबा दाऊदको आउँदै गरेको राज्य धन्यको होस्! हे स्वर्गमा बस्नुहुने, उहाँको जय होस्!” ११ अनि उहाँ यरूशलेमभित्र पस्नुभयो र मन्दिरमा छिर्नुभयो। उहाँले चारैतिर सबै कुरा हेर्नुभयो तर साँझ परेकोले त्यहाँबाट निस्केर उहाँ बाह्र जनासित बेथानी जानुभयो। १२ भोलिपल्ट उहाँहरू बेथानीबाट निस्केपछि उहाँलाई भोक लाग्यो। १३ अनि उहाँले टाढैबाट अन्जीरको एउटा रूख देख्नुभयो र त्यसमा पात लागेको थियो। त्यसैले फल पनि लागेको छ कि भनी हेर्न उहाँ त्यसतिर जानुभयो। तर त्यहाँ पुगेपछि उहाँले त्यसमा पातबाहेक केही पाउनुभएन, किनकि त्यतिखेर अन्जीर फल्ने मौसम भएको थिएन। १४ त्यसैले उहाँले त्यसलाई यसो भन्नुभयो: “तेरो फल अबदेखि कसैले कहिल्यै खान नपाओस्।” यो कुरा उहाँका चेलाहरूले सुनिरहेका थिए। १५ अनि उहाँहरू यरूशलेम पुग्नुभयो। त्यहाँ पुगेपछि उहाँ मन्दिरभित्र पस्नुभयो र त्यहाँ किनबेच गरिरहेकाहरू सबैलाई बाहिर लघार्न थाल्नुभयो। उहाँले पैसा साट्नेहरूको टेबुल अनि ढुकुर बेच्नेहरूको बेन्च पनि पल्टाइदिनुभयो। १६ अनि उहाँले कसैलाई पनि भाँडाकुँडा बोकेर मन्दिरको बाटो भएर जान दिनुभएन। १७ तर उहाँले यसो भन्दै सिकाउनुभयो: “ ‘मेरो घर सबै जातिका लागि प्रार्थनाको घर कहलाइनेछ’ भनेर के धर्मशास्त्रमा लेखिएको छैन र? तर तिमीहरूले यसलाई डाँकुहरूको ओडार बनाएका छौ।” १८ यो कुरा मुख्य पुजारीहरू र शास्त्रीहरूले सुने अनि तिनीहरूले उहाँलाई मार्ने उपाय खोज्न थाले। तर तिनीहरू उहाँसित डराउँथे किनभने उहाँको शिक्षा सुनेर भीड छक्क पर्ने गर्थ्यो। १९ साँझ परेपछि उहाँहरू सहरबाहिर जाने गर्नुहुन्थ्यो। २० बिहान सबेरै बाटोमा जाँदै गर्दा उहाँहरूले त्यस अन्जीरको रूख जरैदेखि सुकिसकेको देख्नुभयो। २१ त्यसैले येशूले त्यस रूखलाई भन्नुभएको कुरा सम्झँदै पत्रुसले उहाँलाई भने: “रब्बी, हेर्नुहोस्! तपाईंले सराप दिनुभएको अन्जीरको रूख त सुकेछ।” २२ अनि येशूले तिनीहरूलाई भन्नुभयो: “परमेश्वरमा विश्वास गर। २३ म तिमीहरूलाई साँचो-साँचो भन्छु, यदि कसैले यस पहाडलाई ‘यहाँबाट उप्किएर समुद्रमा खस्’ भन्छ र आफ्नो मनमा शङ्का गर्दैन तर आफूले भनेको कुरा पूरा हुनेछ भनेर विश्वास गर्छ भने उसले भनेझैं हुनेछ। २४ यसैले म तिमीहरूलाई भन्छु, तिमीहरूले प्रार्थनामा जे-जे माग्छौ, ती तिमीहरूले पाइसकेझैं गरी विश्वास गर अनि तिमीहरूले ती साँच्चै पाउनेछौ। २५ अनि तिमीहरू प्रार्थना गर्न उभिंदा अरूको विरुद्धमा जे-जति कुरा छन्‌, ती सबै क्षमा गर। तब स्वर्गमा बस्नुहुने तिमीहरूका बुबाले पनि तिमीहरूका अपराधहरू क्षमा गर्नुहुनेछ।” २६ * — २७ उहाँहरू फेरि यरूशलेम पुग्नुभयो। अनि उहाँ मन्दिरमा हिंडिरहनुभएको बेला मुख्य पुजारीहरू, शास्त्रीहरू र धर्म-गुरुहरू उहाँकहाँ आए २८ र उहाँलाई सोध्न थाले: “तपाईं कुन अख्तियारले यी सब गर्दै हुनुहुन्छ? अथवा तपाईंलाई यसो गर्ने अख्तियार कसले दियो?” २९ येशूले तिनीहरूलाई यस्तो जवाफ दिनुभयो: “म तिमीहरूलाई एउटा प्रश्न सोध्छु। तिमीहरूले मलाई त्यसको जवाफ देओ र म कुन अख्तियारले यी सब गर्दैछु, म पनि तिमीहरूलाई भन्छु। ३० यूहन्नाले बप्तिस्मा गराउने अख्तियार परमेश्वरबाट* पाए कि मानिसहरूबाट? मलाई जवाफ देओ।” ३१ तब तिनीहरू आपसमा यसो भन्दै तर्क गर्न थाले: “ ‘परमेश्वरबाट’ भनौं भने ‘त्यसोभए, तिमीहरूले किन ऊमाथि विश्वास गरेनौ त’ भनेर उसले सोध्नेछ। ३२ तर ‘मानिसहरूबाट’ भन्ने आँट कसरी गरौं?”—तिनीहरू भीडसित डराउँथे, किनकि यूहन्ना वास्तवमै भविष्यवक्ता थिए भनी सबै मानिसहरूले मान्थे। ३३ त्यसैले तिनीहरूले येशूलाई यस्तो जवाफ दिए: “हामीलाई थाह छैन।” तब उहाँले तिनीहरूलाई यस्तो जवाफ फर्काउनुभयो: “म कुन अख्तियारले यी सब गर्छु, म पनि तिमीहरूलाई भन्दिनँ।”
^ मर्कू ११:९ * मत्ती २१:९ को फुटनोट हेर्नुहोस्।
^ मर्कू ११:२६ * विभिन्न प्रमुख पुराना ग्रीक पाण्डुलिपिहरूमा यो पद पाइँदैन; तर बाइबलका केही अनुवादहरूमा भने यस पदमा यस्तो लेखिएको छ: “तर यदि तिमीहरूले क्षमा गरेनौ भने स्वर्गमा बस्नुहुने तिमीहरूका बुबाले पनि तिमीहरूका अपराधहरू क्षमा गर्नुहुनेछैन।” (मत्ती ६:१५ तुलना गर्नुहोस्।)
^ मर्कू ११:३० * शाब्दिक, “स्वर्गबाट।”